भगवान शिवसँग जोडिएका यी रहस्यहरु तपाईँलाई थाहा छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
भगवान शिवसँग जोडिएका यी रहस्यहरु तपाईँलाई थाहा छ ?
अमरनाथ गुफाको कथा ःभगवान शिवका भक्तका लागि अमरनाथ गुफा धेरै महत्वपूर्ण छ । जब माता पार्वतीले भगवान शिवसँग अमरत्वको रहस्य बताउन भनिन् तब उनी गुफाबाट बाहिर निस्किए । गुफा जाने बाटोमा उनले कयौँ काम गरे । यही कारण गुफा जाने बाटोलाई पुरा चमत्कारिक मानिन्छ । अमरकथाको रहस्य बताउने क्रममा भगवानले आफ्ना पुत्र, वाहन आदिलाई निर्जन स्थानमा छाडिदिए । यी सबै स्थान तीर्थस्थल बने । पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव गुफासम्म हाल जम्मु कश्मीर रहेको पहलगाम हुँदै पुगेका थिए । (gnewsnepal बाट सभार)